ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အီတလီဘောလုံးကစားသမားများ Federico Bernardeschi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
LB သည်ဘောလုံးကြယ်တစ်ပွင့်၏ပုံပြင်အပြည့်အစုံကို“ nickname” ဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ဘရွန်း“ ကျွန်ုပ်တို့၏ Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကသူ၏ကလေးဘဝ အချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Federico Bernardeschi ၏ဘဝနှင့်ထ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် ThePlayersTribune, Wallpapercave နှင့် Gianlucadimarzio
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ၊ မိသားစုနောက်ခံ၊ ပညာရေး / လုပ်ငန်းခွင်တည်ဆောက်မှု၊ အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝ၊ ကျော်ကြားမှုလမ်း၊ ကျော်ကြားမှုပုံပြင်၊ ဆက်ဆံရေးဘဝ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ၊ မိသားစုအချက်အလက်များ၊
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းသိတယ် သူသည်အီတလီ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ပါရမီရှင်အလားအလာများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးသူ၏အနီးကပ်ဆုံးအနေအထားနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမျှော်မှန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သောသူများက Federico Bernardeschi ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Federico Bernardeschi ကို 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 1994 နေ့တွင်သူ၏မိခင်မှသူနာပြုနှင့်ဖခင်ဖြစ်သူ Alberto Bernardeschi (စကျင်ကျောက်စက်ရုံလုပ်သား) ကိုအီတလီနိုင်ငံ Tuscany ဒေသရှိ Carrara တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အောက်တွင်ကလေးသူငယ်အဖြစ် Federico Bernardeschi ၏လှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် Federico Bernardeschi ၏ရှားပါးဓာတ်ပုံ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် ThePlayersTribune
Federico Bernardeschi သည်သူ၏မိသားစုမှအီတလီဇာတိမြို့ Carrara မှဆင်းသက်လာပြီးလူသိများသောလူသိများသောနာမည်ပြောင်၊ ''စကျင်ကျောက်၏မြို့' ယခုမေးခွန်း: အဘယ်ကြောင့်စကျင်ကျောက်၏စီးတီး... Carrara သည်လှပသောအဖြူရောင် Carrara စကျင်ကျောက်ဖြင့်ကျော်ကြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းသိလား?… City of Marble သည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအီတလီဒဏ္endာရီဂိုးသမား၏မွေးရပ်မြေနှင့်အိမ်ဖြစ်သည် Gianluigi Buffon.
Carrara ၏လှပသောဓာတ်ပုံ (စကျင်ကျောက်၏စီးတီးFederico Bernardeschi သည်သူ၏မိသားစုမူလအစရှိရာ) ။ စကျင်ကျောက်၏စီးတီး။ Image ကို Credit: မင်္ဂလာပါ နှင့် Pinterest နှင့် TuscanyPrivateTour.
Federico Bernardeschi ၏မိဘတစ် ဦး သူ့အဖေ ကလေးဘဝတုန်းကမြို့မှာစကျင်ကျောက်ကုမ္ဗဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်များနေသောမိဘ (များ) ရှိကလေးများကဲ့သို့ပင် Federico သည်ညနေတိုင်းသူ့အဖေကိုသာတွေ့နိုင်သည် Alberto5နံနက်မနက်အိပ်ရာမှထ၊6မတိုင်မီအိမ်မှထွက်ခွာ။ ညနေ6ညနေအိမ်သို့ပြန်လာမည်။ ထို့ကြောင့် Federico သည်သူ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုမိခင်နှင့်ညီမ Gaia နှင့်အတူကုန်လွန်ခဲ့သည်။
ဘောလုံးဘောလုံးနှင့်အတူ Destiny ကြုံတွေ့ရ: Federico Bernardeschi သည်သုံးနှစ်သမီးအရွယ်တွင်သူ့အဖေသည် Carrara မြို့လယ်ရှိmassiveရာမကစားစရာစတိုးဆိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Federico လူငယ်သည်စတိုးဆိုင်အတွင်းလှေကားထစ်နှစ်ခုလှမ်းလိုက်သည်နှင့်သူပထမဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့သည့်ဘောလုံးမှာဘောလုံးဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းပဲသူချက်ချင်းပဲပြေးထွက်သွားလိုက်ပြီးသူတို့ထွက်ခွာသွားပြီလို့သူ့အဖေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲလ်ဘတ်တိုသည် Federico ကိုအခြားကစားစရာများကိုကြည့်စေလိုသော်လည်းသူသည်ဘောလုံးဘောလုံးကိုသာလိုချင်ကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။
“ ဘောလုံးတစ်ခုလိုချင်တာကိုငါတွေ့ခဲ့လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကငါ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ငါပြောသင့်တာက၊ ငါ့မိသားစုရင်းမြစ်ကလူတွေရဲ့ဇာတ်ကောင်ပါ။ Carrara မှလူများသည်စကျင်ကျောက်ကဲ့သို့ခက်ခဲကြသည် - ပိုမိုသိရှိလိုပါကမေးမြန်းပါ Gigi Buffon။ "
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
သူ၏အသက်တာတွင်အစောပိုင်းက Federico သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လိုခြင်း၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးပညာရေးရရှိရန်သူကြိုးပမ်းရာတွင်စိန်ခေါ်မှုများရှိခဲ့သည်။ Federico နေထိုင်သောရိယာတွင် Marble City တွင်ကောင်းမွန်သောလူငယ်အသင်းများမလုံလောက်ပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူ့ရပ်ကွက်ကအကောင်းဆုံးအသင်း၊ ASD အားကစား Atletico Carrara သူတို့နှင့်အတူအချိန်တိုအတွင်းမိဘများလိုချင်သည့်အရာကိုမပေးခဲ့ပါ။
Federico Bernardeschi ၏မိဘများသည်သူတို့၏သားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်မိဘများသည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ့အမေနှင့်အဖေနှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏သားသည်စောစောစီးစီးကျောင်းထွက်သွားမည်ဟုသဘောတူခဲ့ကြသည် 3: 15 ညနေ (ပုံမှန်ကျောင်းများမပြီးဆုံးမှီ 45 မိနစ်ပိုင်းအကယ်ဒမီအသစ်နှင့်အတူဘောလုံးကစားရန်။
Federico Bernardeschi Atletico Carrara နှင့်အတူအစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု။ အကြွေး: IG
အသက် ၈ နှစ်တွင် Federico Bernardeschi သည်သူ၏ဘောလုံးပညာရေးကိုစတင်ခဲ့သည် Polisportiva Ponzanoသူ၏မိသားစုအိမ်မှမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသော 70 နှင့်ပတ်သက်သည့် Empoli နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူ့အမေကသူ့ကိုနေ့တိုင်းကျောင်းမတက်ခင်နေ့လယ်စာစားခိုင်းတယ်။များသောအားဖြင့်ခေါက်ဆွဲ) ပြီးတော့မိသားစုရဲ့မီးခိုးရောင်နှင့်အတူ Empoli ဆီသို့သူ့ကိုမောင်း Opel Vectra။ အဖြစ်နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်။ စကားပြော ThePlayersTribune တစ်ချိန်က Federico Bernardeschi ကပြောခဲ့သည်။
ငါသိသောကြောင့်, ငါများသောအားဖြင့်အနည်းငယ်နောက်ကျလိမ့်မယ် ကျွန်တော့်ဘွတ်ဖိနပ်ကိုကားထဲမှာချည်ထားရမယ်။ အကြှနျုပျ၏မိခင်အနိုင်နိုင်ရပ်တန့်လိမ့်မယ်။ ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုတက်နိုင်ဖို့အစေးကိုကျွန်တော်ထွက်မယ်။ နှစ်နာရီကြာပြီးတဲ့နောက်ဘောလုံးလေ့ကျင့်မှုပြီးဆုံးသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်လာ ဦး မယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သူသည်အလုပ်များသောအားကစားကျောင်းမှအားကစားနေ့မှအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ Federico Bernardeschi ၏မိဘများနှင့်အခြားမိသားစုဝင်များသည်သူဖြစ်သည်ကိုသိကြသည် သူသင်ယူနေသည့်စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်နေစဉ်သူတို့သည်ကြီးစွာသောအရာများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
မင်းသိလား?… Federico သည် 10: 30 pm သို့မဟုတ် 11 pm မတိုင်မီအထိအိပ်ရာမဝင်ပါ။ ထို့နောက်နံနက်စောစောထ။ ထပ်မံပြုလုပ်ရန်။ ထိုသို့သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်နောက်ပိုင်းတွင်အကျိုးအမြတ်များရရှိခဲ့သည်။ Federico Bernardeschi သည် Florentina နှင့်အတူမိသားစုဝင်များအားလုံး၏ဂုဏ်ယူမှုနှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးမှုများတက်ရောက်ရန်ခေါ်ယူခံရသောအခါ (သူကငါ့ခရီးခြေလှမ်းတိုင်း၌သူနှင့်အတူနေ၏) အဘယ်သူမျှမဘောငျရှိခဲ့ပါတယ်။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အောင်မြင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကို Federico Bernerdeschi 2003 တွင်တွေ့ခဲ့သည် (9 ၏အသက်အရွယ်မှာ) Fiorentina ၏အကယ်ဒမီတောင်ပံသို့ပူးပေါင်း။ ကလပ်တည်ရှိရာဖလိုရင့်စ်သည် Federico နှင့်သူ၏အမေကားမောင်းခဲ့သည့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် Empoli ၏အရှေ့ဘက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
Federico Bernerdeschi ရဲ့အဖေဟာသူ့အလုပ်အကိုင်အစကတည်းကအခွင့်အလမ်းတိုင်းအတွက်သူ့ကိုဒေါသထွက်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အမြဲတွန်းအားပေးလိမ့်မယ်။ သူ့အဖေဖန်တီးခဲ့သောဖိအားများကိုစီမံရန်အတွက် Federico ကတစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကလေးဘဝတုန်းကတစ်ခါတလေသင်အရမ်းစိတ်မပျက်ဖြစ်တာ၊ အထူးသဖြင့်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလအတွက်သင့်ကိုဒေါသထွက်စေတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်ဆီကလာတဲ့အခါမျိုးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်အဖေကသူလိုချင်တာကိုပိုနားလည်ချင်လာတယ် ယုံကြည်သည် ငါ့အတွင်း၌ရှိ၏”
ဖခင်ဖြစ်သူကဖိအားပေးမှုကြောင့် Federico နည်းပြသည်လူငယ်ကစားသမားများထံမှတက်ကြွစွာကစားခဲ့စဉ်ကကလပ်အသင်းအပေါ်ကြီးမားသောစွဲမှတ်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။
Federico Bernardeschi Fiorentina နှင့်အစောပိုင်းနှစ်များ။ Image ကို Credit: IG
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
16 ခေတ်တွင်သူ့ဘဝ၏အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားနေသော Federico Bernardeschi သည် Fiorentina နှင့်ထိပ်တန်းအသင်း၏ပုံပန်းသဏ္makingာန်ကိုပြောင်းလဲရန်အလွန်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ သူ့ဘဝရှိအရာရာတိုင်းချောချောမွေ့မွေ့သွားနေသည်ဟုသူထင်သကဲ့သို့ အဆိုပါကံဆိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်.
ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်း ဆင်းရဲသော Federico သည်ပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်နေ့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Florentina ဆေးအဖွဲ့သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌မှားယွင်းနေသည်ဆိုသောအချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများနှင့် Xrays တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဆရာဝန်က Federico Bernardeschi ၏မိဘများအားသူတို့၏သား၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌သူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရာများကိုပြောပြခဲ့သည်။
“ မင်းရဲ့သားမှာနှလုံးကြီးထွားလာတယ်။ မင်းဘယ်လောက်ဆိုးသလဲမသေချာဘူး ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ရင်သူဟာသူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကိုဆက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆရာဝန်ကသူ့မိဘတွေကိုပြောပြတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Federico သည်မယုံကြည်နိုင်ပါ၊မဟုတ်ဘူး…မဖြစ်နိုင်ဘူး”. Federico ရဲ့အမေဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဘောလုံးသမားကိုအေးဆေးစွာနေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
Federico Bernardeschi သည် Cardiomegaly ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းသည် An Enlarged Heart ဟုဆိုလိုသည်။ Image ကို Credit: WebMD
အခြေအနေကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဆရာဝန်များက Federico သည်ခြောက်လသာဘောလုံးကစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘာနာဒက်စ်ချီကီမိသားစုသည်အလွန်စိတ်သက်သာရာရစေသည်။ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းသူသည်မိမိဘဝ၏အခက်ခဲဆုံးခြောက်လအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုရာတွင်အလုပ်များနေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ မရေမတွက်နိုင်သောစစ်ဆေးမှုများ၊ အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများပြီးနောက် Federico သည်သူ၏ဘောလုံးကိုပြန်လည်စတင်ရန်နောက်ဆုံးတွင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
20 ဇွန် 2014 တွင် Federico သည် Vincenzo Montella ၏ညွှန်ကြားချက်အရပထမအသင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သော (အသက် 22) သုံးနှစ်မပြည့်မီတွင်၊ Federico လူငယ်အားသူ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကပ္ပတိန်လက်ကိုအပ်ပေးခဲ့သည် ရင့်ကျက်ခြင်း, ကြိုးစားအားထုတ်မှု, ကောင်းသောအနေအထားအသိနှင့်ရည်မှန်းချက်များအတွက်မျက်စိ။ 22 ၏ Wee ခေတ်တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းသည်အတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကုသမှုခံယူထားသည့်အီတလီဘောလုံးအသင်း၏အခြေအနေတွင်အလွန်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည်။
နောက်ရာသီ (2015-16), ဘာနာဒက်ရှ် ခဲ့ ယခင်က Roberto Baggio ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ခဲ့သောနံပါတ် 10 ရှပ်အင်္ကျီကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူလည်းသူ၏အမည်ပြောင်တယ် နာမည်ကျော်ဗိသုကာနောက်မှ "Brunelleschi" ။ သူ့နည်းပညာနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Bernardeschi သည်ဂျာစီ ၁၀ ခုပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ Image ကို Credit: blackwhitereadallover
ထိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တက်ကြွသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေဖြင့် Federico Bernardeschi သည် AIAC ဘောလုံးခေါင်းဆောင် Under-21 ဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ထိုအောင်မြင်မှုသည်ရပ်တန့်သွားရုံမျှမကသူသည် UEFA ဥရောပလက်အောက်ရှိ 21 ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်တစ်ခုတည်းသောအီတလီဖြစ်လာသည်။ ဒီအပြုအမူဟာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အချို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။
အီတလီဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အနွေးဆုံးဆုံးသောအိမ်ခြံမြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည် Fiorentina ၏အဓိကပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောဂျူဗင်တပ်စ်သည်ဘာဂျီယို (1990 ရှိ) သည်ဖလိုရန်စ်မှထွက်ခွာသွားပြီးကတည်းကသူ့ကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်Federico Bernardeschi သည်သူ၏အသင်းကိုအီတလီလိဂ်ဘောလုံးကစားသမားအားလုံးနီးပါးအနိုင်ရအောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ Serie A၊ Coppa Italia နှင့် Supercoppa Italiana တို့ဖြစ်သည်.
Federico Bernardeschi ၏ထနှင့်ထ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် Pinterest FootyAnalyst
ရှေးရှေးတုန်းက, ဘောလုံးထက်အခြားကစားစရာကစားစရာကိုရွေးချယ်ဖို့ငြင်းဆန်သောကလေးငယ်ယခုရှိပါတယ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတစ်ခုဥက္ကာပျံမြင့်တက်ကြံ့ကြံ့ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေရှေ့မှာ။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝ
အောင်မြင်သောယောက်ျားတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာအံ့အားသင့်စရာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မျက်လုံးပြူးနေသည်။ ဤ Azzurri အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွင်နာမည်ကြီးလှသော WAG သည်နောက်ပိုင်းတွင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည်၏လှပသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မှအပအခြားဖြစ်သည် Veronica Ciardi.
Federico Bernardeschi Girlfriend- Veronica Ciardi နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Image Credit: DropNews
Veronica Ciardi နှင့်သိကျွမ်းခြင်း: မိဘတွေကိုမွေးဖွားပြီး Veronica ဟာ Big Brother ရဲ့ 2009 Italian version မှာအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဖြစ်မှန်ပြပွဲတွင်သူနေထိုင်စဉ် Sarah Nile အမည်ရှိပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဆက်သွယ်မှုဟာအီတလီရုပ်မြင်သံကြားမှာအရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ ကောင်မလေးရည်းစား အီတလီအဖြစ်မှန်ပြပွဲတွင်ထုတ်လွှင့်မည့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။
Federico Bernardeschi Girlfriend- Veronica Ciardi နှင့်သူမ၏ချစ်သူ Sarah Nile ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် ပန်းချီဆရာ
Veronica နှင့်စာရာတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်စက်တင်ဘာလ 2010 တွင်အီတလီစာနယ်ဇင်းများ၏ဖိအားပေးမှုကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Veronica ထက်ကိုးနှစ်ငယ်သော Federico Bernardeschi သည် Formentera ၌ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့မြင်ရသည့်အချိန်ကတည်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမနှင့်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်။
နှစ်နှစ်ကြာအောင်ချိန်းတွေ့ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့ Big Brother ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမကြည့်တဲ့သူ Bernardeschi ကသူ့ချစ်သူရည်းစားအားအီတလီစာနယ်ဇင်းများပြောတာကိုရင်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
Bernardeschi သည်နှစ်နှစ်အကြာချိန်းတွေ့ပြီးနောက်သူ၏ရည်းစားအားအဆိုပြုခဲ့သည်။ Image ကို Credit: forzaitalianfootball
ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ကတစ် ဦး ကြေငြာခဲ့သည်အဖြစ်စုံတွဲများအဘို့အမှုအရာအလွန်ကောင်းကောင်းမသွားဘူး အစောပိုင်း 2017 အတွက်ချစ်ကြည်ရေးအုပ်စုခွဲ။ သူ၏ရည်းစားနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရာတွင် Bernardeschi က၎င်းသည်လူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ငါးလကြာကံဆိုးစွာဖြင့်ခွဲထွက်ပြီးနောက် Federico ၏ရည်းစားဟောင်းသည် Instagram မှတစ်ဆင့်သူနှင့်ခွဲနေကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သူတို့ကခွဲထွက်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ချစ်သူများဟောင်း၏အကျပ်အတည်းအဆုံးသတ်သွားပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ချိန်းတွေ့ခြင်းသို့ပြန်လာသောသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုလပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ သြဂုတ်လ 28 ၏ 2019 တွင် Veronica နှင့် Federico တို့သည်မိဘများဖြစ်လာသည်။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Federico Bernardeschi ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုလေ့လာခြင်း သူကသူ့ဘဝကိုသူ့ဘဝဘယ်လိုရှင်သန်စေတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတဲ့ပုံရအောင်ကူညီပါ။
သူသည်ကြီးပြင်းစဉ်တွင်အဖြူရောင်ရောင်စုံစကျင်ကျောက်များများစွာရှိနေသောကြောင့် Federico ကဤစကျင်ကျောက်များသည်အိပ်မက်မှအိပ်နေစဉ်တွင်သူ၏အိပ်မက်များအားပုံရိပ်ဖော်စေသည့်အိပ်မက်များထဲသို့ယိုယွင်းသွားလိမ့်မည်ဟု Federico မှပြောကြားခဲ့သည်။ ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအဖြစ်အပျက်ကိုသူခြောက်နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
Federico Bernardeschi Personal Life ကိုကွင်းပြင်၌သိကျွမ်းခြင်း။ Image Credit: Instagram
မိမိအခွေးအဘို့အဆင်တူ: နာမည်ကြီးဘောလုံးကစားသမားများ ကို C စီရော်နယ်ဒို, နေမာ, Sanchez စသည်တို့သည်စစ်မှန်သောခွေးချစ်သူများဖြစ်သည်။ သင်၌လည်းခေတ်သစ်ဂိမ်းတွင်သစ္စာစောင့်သိမှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်ဟု Federico နှင့်သူ၏ခွေးကြီးကောင်ကြားရှိဆက်ဆံရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။
Federico Bernardeschi သည်ဘောလုံး၏အကြီးမားဆုံးခွေးချစ်သူများဖြစ်သည်။ Instagram ကိုချီးမြှင့်သည်
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝ
အစောပိုင်းကရှင်းပြခဲ့သောဘာနာဒက်ရှီမိသားစုပုံပြင်သည်ဘောလုံးပရိသတ်များအားရုန်းကန်နေရခြင်းကိုသင်ကြားပေးသော်လည်း၎င်းကိုယုံကြည်ရန်ကြီးမြတ်မှုကိုအောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းထားသည်။မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာမခံစားရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသူတို့၏သက်သောင့်သက်သာဇုန်မှထ။ တစ်စုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်' အဲဒီအစားသို့မိမိအဖေကိုလိုက်နာ၏ ယနေ့ခေတ် Federico သည်စကျင်ကျောက်ကျောက်တုံးကျောက်မျက်လုပ်ငန်းများအားဖြင့်သူ၏မိသားစုတစ်ခုလုံးအားဂုဏ်ယူစေသည် ဘောလုံးအားဖြင့်သူ၏မိသားစု၏အတိတ်ကိုငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်မှုဆီသို့ ဦး တည်စေသော။ အခုသူ့မိသားစု ၀ င်တွေအကြောင်းပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ကြပါစို့။
Federico Bernardeschi ၏ဖခင်အကြောင်း မိဘအများစုလိုပဲCarrara'Federble အဖေ Alberto သည် Marble ၏မြို့တော် Carrara Marble ကျောက်မိုင်းရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်နာရီများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊5နံနက်တွင်ထ၊6နံနက်အလုပ်မှထွက်ခွာ။ ညနေ6ညတွင်အိမ်သို့ပြန်လာသည့်ဖခင်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏သယ်ဆောင်သော Opel Vectra ကိုသူ၏ဇနီးနှင့်သားအတွက်ထားခဲ့စဉ်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများအသုံးပြုမည် ( Federico) ကိုအိမ်၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်းနှင့်ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးစင်တာတို့အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုရန်။
သူ၏သားကိုပထမဆုံးကစားမည့်ဘောလုံးကိုကောက်ယူခဲ့သည့်ကစားစရာစတိုးဆိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားချိန် မှစတင်၍ ကံကြမ္မာနှင့်သူ၏ပထမဆုံးရက်စွဲကိုမွေးဖွားခြင်းကြောင့်အယ်လ်ဘာတိုသည်ဂုဏ်ပြုခံရသည် ဒါ့အပြင်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့သူ့ကိုတွန်းအားပေးခြင်း။
Federico Bernardeschi ၏မိခင်အကြောင်း: မင်းနာမည်ကိုမင်းရေးနေချိန်မှာမသိဘူး။ သို့သော်အီတလီမီဒီယာများက Federico ၏မိခင်သည်သူတို့မိသားစုအိမ်နှင့်မဝေးသောဆေးရုံတွင်သူနာပြုတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်ချစ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသူမ၏သားကိုမြေမြှုပ်ရန်ခလုတ်ကိုလှန်လိုက်သည်။ Federico အတွက်တော့သူနဲ့သူ့အဖေကြားမှာမျှမျှတတရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကစားသမား Tribune အစီရင်ခံစာ) ။
Federico Bernardeschi ရဲ့မွေးချင်းတွေအကြောင်း: သူ၌အစ်ကိုမရှိဟုထင်ရသော်လည်း Federico တွင် Gaia Bernardeschi အမည်ရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိသည်။ Gaia ကိုလူသိများသည် သူမ၏အစ်ကိုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးခြင်းသည်သူမ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
Federico Bernardeschi ၏နှမ Gaia Berna နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် Facebook က
သူကသူ့အစ်ကိုက Fiorentina ကိုသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်သူ့အစ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားဖွယ်ရာ post တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်က Federico Bernardeschi ၏ညီမက;
“ ချစ်လှစွာသောမောင်၊ Fiorentina ပရိတ်သတ်တွေကိုဂီတအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်။ မင်းခြေထောက်နားမှာဘောလုံးနဲ့ကခုန်ခြင်းကိုခံရပြီးနောက်အားကစားကွင်းကိုအသံတိတ်သွားစေတယ်။ ချစ်ခင်ရပါသောဖရီယွန်တီနာပရိသတ်များ၊ မင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အစ်ကိုကသူလိုလူနဲ့ကစားသမားမျိုးကိုအမြဲပြသခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့လူတိုင်းတိတ်ဆိတ်နေကြပြီ၊ ငါတို့တွေအရမ်းပျော်နေကြပြီ”
Federico Bernardeschi ၏ညီမ Giana ၏စကားများသည်ဖေဖော်ဝါရီလ9တွင်ဖြစ်သည်။ သူမအစ်ကိုသည်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်အိမ်တွင်းပရိတ်သတ်များထံမှစော်ကားမှုကိုခံရပြီးနောက်သူသည်လူစုလူဝေးကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ဒုတိယပိုင်းတွင်အခမဲ့ကန်သွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
ထိပ်တန်းဘောလုံးစူပါစတားများ၏လူနေမှုပုံစံကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်များ၊ အိမ်ကြီးကြီးများနှင့်ရိုးရှင်းသောအပျော်အပါးများကအလွယ်တကူသိနိုင်သည်။ Federico, အလွန်ကြီးမားတဲ့လူနေမှုဘဝကိုတားဆီးပေးတဲ့အရာ၊ ရိုးရှင်းတဲ့ကားတွေကိုမောင်းရတာပိုကြိုက်တယ်၊ ပျမ်းမျှလူနေမှုပုံစံစတဲ့။
Bernardeschi သည်ထူးခြားဆန်းပြားသောလူနေမှုပုံစံကိုပြသရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Image Credit: ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ - autobytel နှင့် Fiorentina IT
Federico ၏ခေတ်မီတိုက်ခန်းသည်သူ၏ပျမ်းမျှလူနေမှုဘဝ၌ပင်မျောက်သုံးကောင်၊ မျောက်မီးလျှံရောင်နှင့်စကျင်ကျောက်စစ်တုရင်ကစားဟန်များဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ သူ့ဖခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ဇာတိမြို့ Carrara မှဖြစ်သည်။
Federico Bernardeschi သည်သူ၏ငွေကြေးအချို့ကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ၌အားလပ်ရက်များယူရန်သုံးစွဲသည်။ Image Credit: Instagram
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
တစ်ချိန်ကလူမည်းကလေးကိုမွေးစားသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် Federico Bernardeschi ကဘောလုံးသည်အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း၊ သူ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာ 'မေတ္တာ' ထို Federico သည်သူ၏ရည်းစားဖြစ်သည့် Veronica Ciardi နှင့်သံအမတ်ကြီးများစွာဖြစ်သည် ကလေး Save အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း။ ဒါကသူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံရတဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဘ ၀ ကိုတိုးတက်စေခဲ့တယ်။
Federico Bernardeschi နှင့် Girlfriend တို့သည်အနက်ရောင်ကလေးငယ်များကိုချစ်သောအဖြူရောင်ကျော်ကြားသူများ၏သာဓကများဖြစ်သည်။ အကြွေး: Instagram ကို
Federico Bernardeschi ၏ Tattoo သည်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်အားအမှတ်ရစေသည် Federico တွင်သူ၏ Ave Maria ဆုတောင်းချက်တက်တူးထိုးအပြင်သေဆုံးသွားသောသူငယ်ချင်းဟောင်း၏ရှပ်အင်္ကျီနံပါတ်ကိုတက်တူးထိုးထားသည်။ Davide Astori ကွယ်လွန်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူ၏နံပါတ်ကိုကက်သလစ်ဘာသာရေးဆုတောင်းပတ္ထနာဘေးတွင်တက်တူးထိုးခဲ့သည်။
Federico Bernardeschi သည် Davide Astori အားသူ၏နံပါတ်တစ် Tattoo ဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် မျက်မှောက်ရေးရာ နှင့် ThePlayersTribune
Federico Bernardeschi ၏ဘာသာတရား: သူ့မိဘများကသူ့ကိုကက်သလစ်ဘာသာဝင်အဖြစ်မွေးမြူခဲ့ပြီးသူသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ဓလေ့ထုံးစံကိုအလွန်လေးစားသည်။ သူသည်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည်ဟူသောခိုင်မာသည့်အသိကိုသူ၏လက်များနှင့်အောက်ရှိပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဓာတ်ပုံတွင် Ave Maria တက်တူးမှင်တွင်တွေ့ရသည်။
Federico Bernardeschi ရဲ့ဘာသာတရားကရှင်းပြသည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် Instagram ကို
ယူနိုက်တက်အတွက်ရည်မှန်းချက်တစ်ချိန်က Federico ဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကဆာကိုအထင်ကြီးစေခဲ့တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာဟောင်းကိုတစ်ချိန်ကအလွန်စိတ်စွဲမှတ်သွားစေခဲ့ပြီးသူက 2011 တွင်ပြန်ခေါ်ယူလိုခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… Federico ၏ဖခင်ကသူ့ဇာတိမြေနှင့်နီးကပ်စွာနေရန်သူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့သောကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်မအောင်မြင်ပါ။
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ Federico Bernardeschi ကလေးဘဝအကြောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 17, 2020